Maitiro ekugadzirisa chiratidzo chenzvimbo chinoonekwa pa iPhone yako | Nhau dze iPhone
alex vincent | 19/04/2022 16:00 | iOS 15, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Chokwadi makazviona henyu chiratidzo chenzvimbo chinoonekwa nguva nenguva kumusoro kwe iPhone yako, pedyo newachi yedhijitari kana munzvimbo yekudzora pachayo padyo neruzivo rwebhatiri. Ichi chiratidzo chinotiudza kuti imwe application kana mudziyo pachawo uri kushandisa yako nzvimbo nekuda kwechimwe chikonzero uye, hongu, une mukana wekuzvibata. Tinokuudza pasi apa kuti ungaita sei.
Kuvanzika kwedu ndeimwe yemapoinzi anonyanya kutinetsa kana tichishandisa nharembozha yedu uye Apple inozviziva. Pamusoro pekuverengera mune yazvino iOS inogadziridza mukana wekugonesa maapp kuti atitevere mamwe dhata, yanga ichisanganisira kwenguva yakareba mukana wekutonga kuti ndeapi maapplication anoshandisa nzvimbo yako, pavanoishandisa uye isu tinogona kunyange kuziva kana IPhone iri kushandisa iyo nzvimbo. localization kuvandudza imwe mhando yekushandisa system.
Kuti titore masevhisi enzvimbo, isu tinofanirwa kugara tichipfuura nepakati Zvirongwa> Zvakavanzika uye mune list, Sarudzo yekutanga ichaonekwa ndiyo Nzvimbo, apo icharatidza na“Hongu” kana kuti “Aiwa” kana takaita kuti ishandiswe kana kuti kwete.
Kana tapinda chinhu chekutanga chinozoonekwa ndechekuti un toggle kukwanisa kuimutsa kana kuimisa. Chero bedzi isu tiine masevhisi enzvimbo akabatiswa, tinogona kunge takaona chiratidzo chenzvimbo kumusoro kwemidziyo yedu, kana ikadzima, haife yakaonekwa sezvo pasina app ichave nemukana wekutsvaga mudziyo wedu uye kushanda kweGPS kuchamiswa. .
Pakutanga uye kunyatsonzwisisa chiratidzo chenzvimbo chinogona kuoneka (sezvo paine 3 mikana), Apple inosanganisira ngano pazasi pemenu iyi nemhando nhatu dzezviratidzo zvinogona kuoneka zvichibva pakuti kana app yashandisa nzvimbo yedu.
Museve wepepuru usina mhango ichaonekwa mumenu yatinowana kubata iyo nzvimbo kana isu tagadzirisa iyo app inogona kushandisa nzvimbo yedu mune mamwe mamiriro ezvinhu.
Museve wepepuru wakazara kana app ine munguva pfupi yapfuura yakashandisa nzvimbo yako.
Museve wakazara grey when app yashandisa nzvimbo yako pane imwe nguva mu Maawa ekupedzisira e24.
Zvakakosha kuziva ma icons aya sezvaanoita Mu "task bar" yedu tichakwanisa kuona maviri: museve usina chinhu kana museve wakazadzwa. Zvazvinoreva zvichafanana: museve usina chinhu kana isu taita kuti imwe app igamuchire nzvimbo yedu mune mamwe mamiriro (senge app yemamiriro ekunze) uye museve unozadza, kana app iri kuishandisa parizvino. Asi chenjerera izvi, neazvino interface shanduko ne iOS 15, Apple yakaunza imwe mutsauko: museve wakazadzwa une denderedzwa rebhuruu kumashure. Izvi zvinoreva kuti iyo app yawakavhura iri kushandisa yako nzvimbo panguva chaiyo inooneka chiratidzo.
Kuti tikwanise kubata kana app ichishandisa nzvimbo yedu, isu tichave nemukana mune menyu yatakambowana uye Isu tinogona kuisa application nekushandisa kubata mvumo yekuwana kunzvimbo iyo mumwe nemumwe wavo achava nayo. Kana tangozviita, maapplication akabatidzwa neimwe nzira ndiwo achaita kuti chiratidzo chenzvimbo chioneke pabharaki redu. Tichava neanotevera sarudzo dzekubvumidza app kuwana nzvimbo:
Hazvina kumboitika: iyo app haizokwanisi kukutsvaga uye haizoshandise GPS kana kuratidza chiratidzo chenzvimbo.
Bvunza nguva inotevera kana pakugovera: iyo app inokumbira kuwana iyo app paunenge uchiishandisa uye, kune imwe mashandiro, inoida.
Paunenge uchishandisa app: iyo app ichakwanisa kuwana yako nzvimbo kana yakavhurwa (kana kana iri kumashure kana uine yekumashure refresh yakabatidzwa).
Paunenge uchishandisa iyo app kana majeti: iyo application ichakwanisa kuwana yako nzvimbo kana yakavhurika (kana kana iri kumashure kana iine yekumashure yakagadziridzwa yakagadziriswa) kana kana iwe wamisa iyo widget yeakadaro app.
Nguva dzose: iyo app ichave uye ichashandisa yako nzvimbo nguva dzese, kunyange yakavharwa.
Tichavawo nemukana mune zvimwe zviitiko zve bvumira nzvimbo chaiyo yezvishandiso zvedu kana, pane zvinopesana, tinoda imwe nzvimbo. Isu tinoona yakawanda pfungwa mune yekupedzisira mune maapplication akadai semabhuki, ayo anoshandisa yako nzvimbo chete kuziva nyika yauri uye hazvidi kuziva mugwagwa sezvingaitwa application yekufambisa.
Uyezve, uye zvisinganyanyi kukosha, tinogona kutarisira kushandiswa kunoitwa ne iPhone pachayo kwenzvimbo yedu. Inozivikanwa se "System Services", inoonekwa pamagumo erondedzero yese uye ichatitendera kutonga kana iyo iPhone inoshandisa nzvimbo yedu. Ichi chikamu, nekuwedzera, ndechimwe cheizvo zvinotitendera kuchengetedza rimwe bhatiri kana tikabvisa mamwe acho atisinga shandise zvakanyanya sezvo, zvikasadaro, ivo vanenge vachidhonza nzvimbo yedu nguva dzese.
Zvinonzwisisika yeSystem Services, isu tine mukana wekudzvanya chiratidzo chenzvimbo kuti chirege kuoneka pamabhara ebasa, asi kwete zvekushandisa.. Tinogona kuita izvi nekumisa kana kudzima iyo toogle iyo inooneka pazasi se Status bar icon.
Nenzira iyi, isu tinokwanisa kubata kana chiratidzo chenzvimbo chaonekwa uye kana chisisaonekwe uye isu tichakwanisa kunzwisisa zvishoma zvirinani nguva iyo chinzvimbo chedu chiri kushandiswa. Nekugadzirisa kwakaringana, isu tinozokwanisa kuziva nekuziva kana chiratidzo chichioneka, iyo app iri kutiisa pamepu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa chiratidzo chenzvimbo chinoonekwa pa iPhone yako